निर्मला पन्त हत्याका २ वर्ष : न हत्याराको पहिचान, न पीडितलाई न्याय ! :: यार्सान्यूज :: निर्मला पन्त हत्याका २ वर्ष : न हत्याराको पहिचान, न पीडितलाई न्याय !
निर्मला पन्त हत्याका २ वर्ष : न हत्याराको पहिचान, न पीडितलाई न्याय ! कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या
शनिबार, साउन १०, २०७७ यार्सान्यूज
काठमाडौ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज दुई वर्ष पुगेको छ। घटनाका दोषी पहिचान हुन सकेको छैन भने पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउन पनि छाडेको छैन।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल घटनाको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याएर दोषीलाई दण्डित गर्न सफल भएनन्। २९ माघ २०७६ मा नेपाल प्रहरीको २७ औं महानिरीक्षक बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले करिब ५ महिनाको कार्यकालमा उक्त मुद्दाको फाइलसमेत खोल्न सकेनन्।
यद्यपि आईजीपी नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउने वचन दिएका थिए। त्यस अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा एसएसपी हुँदा ज्ञवालीले कञ्चनपुर पुगेर पनि अनुसन्धान गरेका थिए। घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाक्षेत्रीले विशेष चासो लिएका छन्।
‘सीआईबीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ सीआईबी प्रमुख डीआईजी थापाले भने, ‘आईजीपी साबले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। यो केसलाई गम्भीर भएर हेर्न प्रदेश प्रमुख र सीआईबीलाई निर्देशन भएको छ।’ सीआईबीले अनुसन्धानमा पोख्त टिम पनि कञ्चनपुर पठाउने तयारी गरेको छ।
प्रहरी अधिकारीहरुको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण उनीहरुबारे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रहरी प्रवक्ता निरजबहादुर शाही अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागी कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन्।
अनुसन्धानमा प्रहरीको गम्भीर त्रुटि औंल्याएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी धीरु बस्न्यात (हाल एआईजीबाट अवकाश) को नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई समेत हिरासतमा राख्यो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले डीएनए परीक्षणको विधि नै सही नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगका अनुसार नमुना सकंलन प्रक्रिया त्रूटिपूर्ण थियो। दुई वर्षसम्म कुनै उपलब्धि नआउँदा निर्मलाका परिवारले न्याय पाउने आस मारिसकेका छन्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १०, २०७७ ११:५२